Eto'o Fils: Saika nahalasa azy ireo ny hasolotr'ireo havany. - FIVAVAHANA TELY
SPORTmahazatraNovelas actuOLONA SY FAHAFAHANA
By TELES RELAY Last nohavaozina Jona 18, 2020
Ilay talenta kameroney Samuel Eto'o dia nanana asa matanjaka izay nahita azy nandia ny Real Madrid, FC Barcelona ary Inter Milan. Ny Cameroney dia manana ny lisitr'ireo loka tsara indrindra amin'ny baolina kitra amin'ny alàlan'ny fanangonana saika tropy lehibe rehetra. A laza sy talenta iray izay nahatonga azy ho iray amin'ireo mpilalao ambony indrindra karama eto an-tany rehefa nazoto izy. Tahaka ny ankamaroan'ny kintana, dia natoky ny orinasa iray i Eto'o tamin'ny orinasa iray, ary teo no nanomboka ny olana.
Eny tokoa, araky ny nitaterana ilay tranonkala Sportmania, ilay mpilalao Real Mallorque taloha dia nahatsikaritra fa misy zavatra tsy mety rehefa tsy hitan'ny reniny tany Cameroon izay rehetra nandefasany azy. Eto'o, izay efa nanokana fampialam-boly tamin'ny alàlan'ny alimo ihany koa, dia nahatsapa fa ny takelaka dia mitaky vola aloa avy aminy izay tsy maintsy nandoa azy ilay Jose Maria Mesalles. Ny ratsy indrindra, ity farany dia namindra ny harenany tamin'ny orinasa izay nitantana izany ho tombontsoan'ny orinasan-tsary hafa tantaniny. Eto'o irery ihany no nitazona tombony 1%.
Samuel Eto'o nametraka finoana jamba tamin'i Mesalles. “Nomeny alalana hividy, hivarotra, hanao famindrana ary hitantana ny teti-bolany izy. Izay rehetra azon'i Eto'o dia, izany hoe 40 tapitrisa euros teo anelanelan'ny 2006 sy 2009, dia natolotra an'i Mesalles, "hoy ny tranokala. Io loharanom-baovao io dia manondro fa ny orinasa voatanisa dia mitazona toeran'ny lova an'ny mpanafika Kameroney. Ireo dia "Trano efatra any Palma, Barcelona, ​​ary Paris, tranobe iray manontolo any Douala, fitoerana fiantsenana, trano fitehirizam-bokatra ary Bentley".
Nahita ny potika niaraka tamin'ny raozy dia nanapa-kevitra i Samuel Eto'o fa hamarana ny fiaraha-miasa amin'i Jose Maria Mesalles ary hanao hetsika ara-dalàna momba azy. Soa ihany, ny liona tsy tia masiaka dia niverina soa aman-tsara ary nanalavitra ny fanolorana ny lisitr'ireo mpilalao simba tamin'ny faran'ny fikarakarana azy.
Talenta momba ny talenta: adihevitra Ego teo amin'i Samuel Eto'o sy…
Samuel Eto'o dia nitifitra ny El-Hadji Diouf!
Samuel Eto'o: Ny CAN2021 dia handalo daty farany
Jean Pierre Bekolo niantso ny Kameroneana hifidy andiany amin'ny hazakazaka handimby